Wararka Geo-Engineering - Sannad Kaabayaasha - YII2019 - Geofumadas
Oktoobar, 2019 Engineering, tabo cusub, Microstation-Bentley
Toddobaadkan waxaa lagu qabtay Singapore Sannadka Shirka Kaabayaasha - YII 2019, kaas oo mawduuca ugu weyni uu diiradda saarayo u dhaqaaqista dhinaca dhijitaalka iyada oo diiradda la saarayo mataano dijitaal ah. Munaasabadda waxaa dhiirrigeliya Bentley Systems iyo istiraatiijiyad istiraatiiji ah Microsoft, Topcon, Atos iyo Siemens; in isbahaysiga xiisaha leh halkii si fudud loola wadaagi lahaa ficilada, waxay doorteen inay soo bandhigaan xalal qiimo-kordhin ah si wada jir ah qaab dhismeedka isbeddelka kacaankii afaraad ee warshadaha ee lagu dabaqay geo-injineernimada, inta badan dhinacyada injineernimada, dhismaha, wax soo saarka warshadaha. iyo maareynta magaalooyinka dhijitaalka ah.
Magaalooyinka, howlaha iyo muwaadinka.
Shakhsi ahaan, ka dib 11 sano oo aan si aan kala go 'lahayn uga qayb qaadanayay saxaafad ahaan ama sharci yaqaan dhacdadan, fagaarayaasha warshadaha waxay ahaayeen waxa aan aad ugu qiimeeyo Maaha sababta oo ah wax cusub ayaa si gaar ah loo bartay, laakiin maxaa yeelay isweydaarsigan ayaa noo oggolaanaya inaan aragno halka ay wax u socdaan. Ma jiraan wax aan ka dhicin warshadaha kale, laakiin asal ahaan sanadkan hanuuninta habsami u socodka iyo muwaadinku maadaama bartamaha dareenka la calaamadeeyay; Ma noqon doonto wax la yaab leh haddii dhammaan qalabka IT-ga ee shirkaddan loo fududeeyo mowduucyadan, moodeel wadaagga iyo isdhexgalka.
Lixda gole ee dhacdadan ayaa ah:
Magaalooyinka Dijitaalka ah: Sannadkan waa kan aan ugu jeclahay, oo ay ka go'an tahay in dib u dhac toos ah lagu siiyo tartanka iyadoo la leeyahay hantida magaaladu waxay dhaaftaa GIS + BIM. Qiimeynta qiimaha waxay ku jirtaa soo bandhigida nidaamyo isku xiran iyo qulqulo isku dhafan halkii laga heli lahaa xalal badan, oo la jaan qaadaya koox-kooxeedyada aan aragnay sanadkii la soo dhaafay iyo soo iibsiga cusub ee halkii laga fikiri lahaa is-dhexgalka moodooyinka maareynta xogta injineernimada iyo juquraafi ahaan, waxay raadinayaan inay fududeeyaan tusaalooyinka magaalooyinka marka laga eego aragtida guud, oo laga fikiray geeddi-socodka muhiimka ah ee waxa dadku ku mashquulsan yihiin maaraynta magaalada: qorsheynta, injineernimada, dhismaha iyo hawlgalka.
Nidaamka Tamarta iyo Biyaha: Kulankaan waxaa diirada lagu saaray caqabadaha dabeecadaha isticmaalka kheyraadka iyo diyaarinta xaaladaha si loo joogteeyo koritaanka baahida. Qiimaha qiimaha wuxuu ku saabsan yahay sida go'aannada ugu wanaagsan looga gaari karo maareynta guud ee shabakadaha qaybinta, iyadoo loo marayo maareynta otomaatiga ah.
Wadooyinka Tareenka iyo Gaadiidka: Qaababka dhismaha ee otomaatiga u ah, macluumaadka degdegga ah ee go'aan qaadashada, maareynta wax ka beddelka iyo dhimista qiimaha ee hoos imanaya maaraynta meertada nolosha ee hantida hadda jirta iyo ballaarinta ku saleysan kobaca magaalooyinka ayaa halkan looga wada hadli doonaa.
Dhismooyinka iyo Dhismooyinka: Madashu waxay dooneysaa inay ka wada hadasho oo ay caqabad ku noqoto jilitaanka waqtiyada iyo dhaqdhaqaaqa dadka. Intaa waxaa sii dheer, sida maaraynta dhijitaalka ahi u horseedi karto isbeddellada xalalka socodka magaalooyinka.
Wadooyinka iyo Buundooyinka Tani waxay ku tusaysaa sida aad dib ugu qaabayn kartid howlaha dhismaha iyo habraacyada adoo adeegsanaya farsamooyinka dhismaha dhijitaalka ah iyo jilitaanka.
Kaabayaasha Warshadaha: Tani waa gole dhexdhexaad ah oo xalliya xalalka PlantSight ee hawlgallada mashaariicda lagu habeeyey gaaska, saliidda iyo nidaamyada macdanta.
Waxay ahayd waxbarid caqli-gal ah sida shirkad qoysku u xakameynayay, halkii ay ka ahaan lahayd dadweynaha, ay soo jeedisay in la xoojiyo hantideeda si ay u qaadato xariifnimadeeda ku wajahan kacdoonka soo socda ee warshadaha, iyada oo gacan-ka-geesin la leh shirkadaha hogaaminaya shirkadaha. injineernimada (Topcon), hawlgalka (Siemens) iyo isku xirnaanta (Microsoft). Sanadihii la soo dhaafay waxaan aragnay waxa ProjectWise la socon doono helitaanka shabakada Azure, iyo sidoo kale PlantSight ee ku wajahan dhamaan suuqa wax soo saarka warshadaha.
Sannadkan, layaabku kamuu yarayn, iyada oo wadajirka shirkadda Bentley Systems - Topcon, uu diiradda saaray abuuritaanka habab dhisme oo cusub oo ku saleysan teknolojiyadda iyo fududeynta howlaha. Xalkani kama soo bixin shaarka shaadhka, laakiin wuxuu ka dhashay cilmi-baaris iyo iskaashi in ka badan 80 sano socday oo ay ka qaybgaleen in ka badan XNUMX kaqeybgalayaal u dhexeeya ururada dowladda, shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo xirfadlayaal horeyba u isticmaali jiray xalka IT, qalabka, habraacyada iyo wanaagga. ku dhaqanka meertada nolosha ee mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha. Tan waxaa lagu maareeyay Akadeemiyada Dhismaha, natiijadana waa Shaqada Dhismaha Dijital ah DCW
Hawlaha Dhismaha Dijitaalka ah, Waxay u furan tahay dhammaan noocyada meheradaha ah isbeddelka isbeddellada warshadeed ee afaraad, laakiin gaar ahaan waaxda dhismaha, shirkaduhu waxay horumarin karaan mashaariicdooda dhismaha - iyadoo la adeegsanayo qulqulka shaqada dhijitaalka ah - iyadoo lala kaashanayo kooxda khubarada ah ee DCW, taas oo iyadu bixin doonta qalab otomaatig ah iyo waxa loogu yeero adeegga "mataanaha".
Lahaanshaha sicirbararka noocan ah ee u dhexeeya shirkadda macaamiisha, Hawlaha Dhismaha Dijitaalka ah, Bentley iyo Topcon, markooda, waxay raadin doonaan inay mudnaanta siiyaan maalgeshigooda dhanka hagaajinta iyo dib u habeynta barnaamijka injineernimada dhismaha. Greg Bentley, agaasimaha guud ee Bentley Systems si fiican ugama dhigi karin:
“Markii Topcon oo aan gaarnay fursada dhisida ee ugu dambeyntii warshadeynta gaarsiinta mashruucyada raashiinka, waxaan balan qaadnay siday u kala horeeyaan inay dhameystiraan shuruudahooda barnaamijyada. Xaqiiqdii, awoodaheena cusub ee softiweerka ah waxay suurtogal ka dhigaysaa in la dhiso mataanaha dhijitaalka ah: iskudhaca xaladaha dhijitaalka ah, qaybaha dhijitaalka ah iyo taariikhda dhijitaalka ah. Waxa hadha, iyada oo noqota dijital ah dhismaha kaabayaasha, ayaa ah in dadka iyo geedi socod dhismuhu ay ka faa'ideystaan ​​teknolojiyadda. Annaga iyo Topcon waxaan ballanqaadnay qaar badan oo ka mid ah ilahayaga ugu wanaagsan, xirfadlayaal khibrad u leh dhismaha iyo softiweerka, si aan ugu adeegno garabka, koofiyadaha qaaliga ah, si aan u soo saarno is dhexgalka dijitaalka ah ee loo baahan yahay. Mashruuca Wadajirka ah ee Dhismaha Dijitaalka ah wuxuu leeyahay maamul buuxa iyo ballanqaadyo raasamaal ah oo ka kooban labadeena shirkadood, iyadoo lagu dhufanayo awoodooda gaarka ah inay gacan ka geystaan ​​isku xirnaanshaha awooda dhismaha ee lagu dhisayo farqiga kaabayaasha adduunka.
Inbadan oo mataano Digital ah
Fikradda Digital Twin waxay ka timid qarnigii la soo dhaafay, in kasta oo laga soo kicin karay inay tahay wax isdabajoog ah, xaqiiqda ah in hoggaamiyeyaasha warshadaha ee saameyntan ku leh tikniyoolajiyadda iyo suuqa ay mar kale dhaqaajinayaan, waxay damaanad qaadayaan inay noqon doonto isbeddel aan laga soo kaban karin. Digital Twin wuxuu aad ugu eg yahay heerka 3aad ee habka BIM laakiin hadda waxay umuuqataa inay iyagu noqon doonaan Mabaadi'da Gemini taasi waxay calaamadayn doontaa khadka khadka.
In cusboonaysiinta mashruucaWWXXXX-kaas oo adeegsanaya Microsoft 365 iyo tikniyoolajiyadda ku saleysan SaaS- adeegyada shabakadda ku saleysan - daruur- iyo isticmaalka xogta BIM waa la ballaariyey, iyagoo u oggolaanaya adeegyada sida Kheywin inay sii ahaadaan dhammaan noocyada dib u eegista iyo heerar kasta oo loogu talagalay dhammaan noocyada shirkadaha. Dareenka ballaaran, oo ay la socdaan ProjectWise 365 kuwa ku lugta leh mashruuca waxay maareyn karaan wax kasta oo la xiriira mashruuca (naqshadaha kaydinta, maareeynta wadashaqeynta wadashaqeynta, ama isweydaarsiga waxyaabaha ka kooban).
Users –professionals- waxay marin u heli karaan Dib u eegista Naqshadeynta eewinwin, si ay ugu xirmaan mashruuca qaab xawaare leh, iyagoo dhex maraya inta u dhexeysa aragtida 2D iyo 3D. Hadda, kuwa u adeegsan doona aaladda mashruucyada, oo ay ku jiraan is-dhexgalkooda ProjectWise, waxaa suurtagal ah in la beddelo mataanaha dijitaalka ah ee mashruuca, iyaga oo isha ku haya halka iyo goorta isbeddeladu ku dhaceen. Dhamaan astaamahaan ayaa la heli doonaa dhamaadka sanadkaan 2019.
"Mataanaha dijitaalka ah ee kaabayaasha iyo mashruuca injineeriyada dhismaha waxay horay ugu socdaan ogaysiisyadaan, gaar ahaan adeegyada cusub ee daruuraha. Isticmaalayaasha ProjectWise, BIM lambarka xNUMX software ee iskaashiga cusub ee daraasadda suuqa ARC, waxay ka dhigeen Bentley mid ka mid ah adeegsadayaasha Azure ugu weyn ee ISV. Waxaan sii ballaarinaynaa mashruuceena deg deg ah ee loo yaqaan 'ProjectWise 1' oo ku saleysan adeegga deg-degga ah ee daruuraha; ka dhigo adeegga daruuriga ah ee Cloudwin si ballaaran oo diyaar u ah dib u eegista naqshadeynta labadaba xirfad ahaan iyo heer mashruuc; iyo fidinta gaaritaanka SYNCHRO iyada oo loo marayo adeegyada daruuraha. Gaarsiinta mashaariicda kaabayaasha ayaa aasaas ahaan ku saleysan waqtiga, iyo sidoo kale meel bannaan. Dhismaha dhijitaalka ah ee 'Bentley' ee loo yaqaan '365D digital' iyo mataanaha mashruuca waxay wadaan wadatashi dijital ah xagga injineernimada kaabayaasha, maanta, adduunka oo dhan! »Noah Eckhouse, gudoomiye kuxigeenka sare ee mashruuca bixinta Nidaamka Bentley
Sida adeegyada daruuraha SYNCHRO Isticmaalayaasha Nidaamka 'Bentley Systems' waxay soo saari karaan moodallo ay ku maareeyaan fulinta mashaariicda, xogta gudaha ama xafiiska, iyo sidoo kale aragtida dhammaan howlaha, moodellada iyo xitaa khariidadaha si wax ku ool ah kor ugu qaada xog aruurinta iyo yareynta halista dhacdada dhacdada qaar Dhammaan waxyaalaha kor ku xusan, is-dhexgalka dhabta ah ee la xoojiyay ee Microsoft ee Hololens 2 ayaa lagu daray, taasoo keentay in aragtida 4D ee naqshadeynta mashruuca, taas oo ah, aragtida 4D ee mataanaha dhijitaalka ah.
Soo iibsi cusub
Qoyska Bentley Systems wuxuu ku biiraa teknoolojiyadda sida Global Mobility Simulation Software (CUBE) - Citilabs, falanqayn (Streetlytics), iyo mid kale oo la xidhiidha maareynta xogta geospatial, Orbit GT oo laga helo bixiyaha Biljimka ah ee Orbit Geospatial Technolgies - oo bixiya barnaamijka '3D khariidad' software, 4D topography, xog ururinta drones.
Soo iibsashadani waa qayb ka mid ah teknolojiyadda casriga ah ee isku-dhafan, oo lagu horumarin karo qorshaynta dijitaalka ah ee magaalada. Ka helista xogta magaalooyinka iyadoo loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha laheyn, oo ku saleysan 4D - Orbit GT-jopografi, gelinta xogta barnaamijyada sida Wadooyinka Furan - Bentley iyo abuurista tusaalooyin leh CUBE, iskuxirka macluumaadka hantida hantida ee hadda jirta ayaa la helay oo ku dhow lagu dhiso, kaas oo dunida dhabta ah lagu qaabeeyey.
Qaabka dhabta ah ee loo adeegsado aaladan, ayaa u oggolaanaya in la garto xaaladda iyo waxqabadka qaabdhismeedka iyo kaabayaasha, - tani waa mid ka mid ah ujeeddooyinka laga leeyahay bartilmaameedyadan. Ka dib markii la helo dhammaan xogta dhabta ah, oo leh adeegga daruuraha Bentley, kuwa xiiseynaya waxay heli karaan xogtan, iyaga oo xaqiijinaya mataanaha dijitaalka ah.
Waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid nahay Nidaamka Bentley. Macaamiisheenna iyo shuraakadayada waxay heli doonaan fursad qaali ah oo ay si buuxda ugu biiriyaan qorshaynta, naqshadeynta iyo ka shaqeynta nidaamyada gaadiidka multimodal. Citilabs, hadafkeennu wuxuu ahaa in loo oggolaado macaamiisheenna inay ka faa'iidaystaan ​​xogta ku saleysan goobta, moodellada dabeecadda iyo barashada mashiinnada iyada oo loo sii marayo alaabadayada si loo fahmo loona saadaaliyo dhaqdhaqaaqa magaalooyinkayaga, gobollada iyo quruumaha. safarradiina waxay qorsheeyeen inay horumariyaan naqshadeynta iyo hawlgallada nidaamyada dhaqdhaqaaqa ee berri «. Michael Clarke, madaxweynaha iyo madaxa Citilabs
Marka la soo koobo, toddobaad xiiso leh ayaa ina sugaya. Waxaan daabici doonnaa maqaallo cusub maalmaha soo socda.
Post Previous" Hore Dib-u-qeexida fikradda Geo-Injineer
Post Next Isdhexgalka naqshadeynta - u heellan BIM horumarsan iyada oo loo marayo Digital mataanoNext »